Android တို့အတွက် မြန်မာ Software အလန်း MPT Gadget v1.0 For Android ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » Android App » Android တို့အတွက် မြန်မာ Software အလန်း MPT Gadget v1.0 For Android
Android တို့အတွက် မြန်မာ Software အလန်း MPT Gadget v1.0 For Android
Wednesday, February 19, 2014 Android App
Android ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာဆော့ဝဲအလန်းလေးတစ်ခုထပ်မံထွက်ရှိလာပါတယ်။ ယင်းဆော့ဝဲရဲ့နာမည်ကတော့ MPT Gadget လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ တခြားဖုန်းငွေစစ်ဆော့ဝဲတွေလို ဆော့ဝဲလေးအနေနဲ့တင်အသုံးပြုနိုင်ရုံသာမက ဖုန်းရဲ့ Home Screen ပေါ်မှာပါ Widget Style အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုနိင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီဆော့ဝဲလေးက လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အချက်တွေကတော့
-အင်တာနက် SETTING ချိန်နည်း
-CALL WAIT, CALL FORWARD , MISS CALL ALERT စတာတွေကိုဒီဆော့ဝဲကနေတစ်ဆင့်လျှောက်နိုင်ခြင်း
-VOICE လျှောက်နိုင်ခြင်း ပယ်ဖျက်နိုင်ခြင်း
စတာတွေကို MPT Gadget ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုထဲနဲ့အကုန်လုပ်ဆောင်နိင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ INTERNET လျှောက်တာတို့ တခြား ၀န်ဆောင်မူတွေလျှောက်တာတို့ပယ်ဖျက်တာမျိုးတို့မှာ VERIFACTION FUNCTION ထည့်ထားတဲ့အတွက် MESSAGE မရောက်လဲသိအောင်ပြုလုပ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ MPT Gadget ကိုရေးသားသူကတော့
Developer ကို ချမ်းမြေ့ကိုကို ဖြစ်ပါတယ်။ MPT Gadget v1.0 for Android ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
MPT Gadget v1.0 for Android အားရယူရန် (Link 1) MPT Gadget v1.0 for Android အားရယူရန် (Link 2) MPT Gadget v1.0 for Android အားရယူရန် (Link 3)
Special Credit To => http://www.myanmarmobileapp.com
MetalWars3Mod APK + Data Unlimited Everything
Iesabel v2.02 APK + DATA
USB Stick , SD Card တွေကို 4GB အထိတိုးကြမလား...??
Android တို့အတွက် မြန်မာ Software အလန်း MPT Gadget...
Android Application ကိုယ်တိုင်ဖန်တီချင်တဲ့ သူငယ်ချ...
Window Password မေ့သွားရင်
့ နည်းလမ်းတကျ အိမ်ထောင်သည်ဘဝ စာအုပ်လေးပါ
Easy Reboot Recovery
မြန်မာ Key Padနဲ့ phone Dialer
samsung galaxy grand sch-i879 firmware update
HUAWEI မြန်မာဖောင့် ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းလေးပါ